Kolosianina 3 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
3 Fa raha niara-natsangana+ tamin’i Kristy ianareo, dia katsaho hatrany ny zavatra any ambony,+ any amin’izay ipetrahan’i Kristy eo ankavanan’Andriamanitra.+ 2 Ataovy foana izay hifantohan’ny sainareo amin’ny zavatra any ambony,+ fa tsy amin’ny zavatra etỳ an-tany.+ 3 Fa efa maty+ ianareo, ary ny fiainanareo+ dia niara-nafenina tamin’i Kristy, izay tafaray+ amin’Andriamanitra. 4 Ary rehefa haseho i Kristy izay fiainantsika,+ amin’izay vao haseho+ miaraka aminy amim-boninahitra+ koa ianareo. 5 Koa vonoy+ ireo fironan-dratsy ao amin’ny rantsambatanareo,*+ dia fijangajangana, fahalotoana, filan’ny nofo,+ fanirian-dratsy, ary ny fitsiriritana+ izay fanompoan-tsampy. 6 Ireo zavatra ireo no mampahatezitra an’Andriamanitra,+ 7 ary ireo indrindra no nataonareo koa taloha, fony ianareo niaina tao anatin’izany.+ 8 Fa ankehitriny kosa, esory aminareo mihitsy ireto rehetra ireto:+ Fahatezerana, fahavinirana, faharatsiana, fanevatevana,+ ary resaka vetaveta+ lazain’ny vavanareo. 9 Aza mifandainga+ ianareo. Esory ny toetra taloha+ mbamin’ireo fanao niaraka taminy, 10 ary tafio ny toetra vaovao,+ izay havaozina tsikelikely amin’ny alalan’ny fahalalana marina tsara, eny, havaozina araka ny endrik’Ilay+ namorona azy. 11 Koa amin’izany dia tsy misy na Grika na Jiosy, na voafora na tsy voafora, na hafa firenena, na Skytianina, na andevo, na tsy andevo.+ Fa i Kristy no zava-drehetra sady ao amin’ny rehetra.+ 12 Koa mitafia fitiavana lalina sy fangoraham-po,+ hatsaram-panahy, fanetren-tena,+ fahalemem-panahy,+ ary fahari-po,+ satria olom-boafidin’Andriamanitra+ ianareo, sady masina no tiana. 13 Mahaiza foana mifampizaka sy mifamela heloka tanteraka,+ raha misy manana antony hitarainana+ momba ny sasany. Namela tanteraka ny helokareo i Jehovah,+ koa aoka ianareo mba hifamela heloka koa. 14 Fa ambonin’izany rehetra izany, dia mitafia fitiavana+ fa fatorana mampiray tonga lafatra+ izy io. 15 Aoka koa ny fiadanan’i+ Kristy hanjaka ao am-ponareo,+ satria ho amin’izany no niantsoana anareo ho vatana iray.+ Ary asehoy fa mahay mankasitraka ianareo. 16 Aoka ny tenin’i Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo, ka hanana ny fahendrena+ rehetra ianareo. Mifampianara+ sy mifananara mandrakariva amin’ny salamo+ sy ny fiderana an’Andriamanitra ary ny hira mahafinaritra momba an’Andriamanitra,+ ka mihirà amin’ny fo ho an’i Jehovah.+ 17 Ary izay ataonareo, na amin’ny teny na amin’ny asa,+ dia ataovy amin’ny anaran’i Jesosy Tompo,+ ka misaora+ an’Andriamanitra Ray amin’ny alalany. 18 Ianareo vehivavy, maneke+ ny vadinareo fa zavatra mety izany eo imason’ny Tompo. 19 Ianareo lehilahy, tiavo foana ny vadinareo+ ary aza tezitra mafy aminy.+ 20 Ianareo zanaka, ankatoavy+ amin’ny zava-drehetra ny ray aman-dreninareo, fa ankasitrahana eo anatrehan’ny Tompo izany. 21 Ianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo,+ mba tsy ho kivy izy. 22 Ianareo mpanompo, ankatoavy amin’ny zava-drehetra ny tomponareo ara-nofo.+ Aza manao fanompoana eo imaso fotsiny, tahaka ny mpila sitraka amin’olona,+ fa ataovy amim-pahatsoram-po sy amin-tahotra an’i Jehovah+ kosa izany. 23 Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin’ny fo manontolo+ toy ny ho an’i Jehovah,+ fa tsy ho an’olona, 24 satria fantatrareo fa avy amin’i Jehovah+ no handraisanareo ny lova+ ho valisoa sahaza anareo. Ary manompoa ny Tompo, dia i Kristy.+ 25 Izay manao ratsy dia azo antoka fa hahazo ny valin’ny+ tsy mety nataony, satria tsy mizaha tavan’olona+ Andriamanitra.
^ A.b.t.: “rantsambatanareo etỳ an-tany.”